Myanmar Bible .Net Myanmar Audio Bible Myanmar Bible .Net
Myanmar Bible .Net
The Words of the Lord is the Bread for the followers.
Bible Topical Index
Bible Word Meaning
Two Year Bible Reading
Myanmar Christian Books
Author: Myanmar Bible .Net
၁။ ဘုရားသခင်၏ကွယ်ကာခြင်း ဆာ၊ ၃၄း၇၊ သု၊ ၁း၃၃
၂။ ဘုရားသခင်၏မစခြင်း ရော၊ ၈း၃၂၊ ဖိ၊ ၄း၁၉
၃။ ဘုရားသခင်၏အပြစ်လွှတ်ခြင်း ကော၊ ၁း၁၄၊ ဆာ၊ ၈၆း၅
၄။ ဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်း ဟေရှာ၊ ၂၆း၃၊ ဆာ၊ ၁၁၉း၁၆၅
၅။ ဘုရားသခင်၏သွန်သင်ခြင်း ဆာ၊ ၃၂း၈၊ ယော၊ ၁၆း၁၃
၆။ ဘုရားသခင်၏ချီးမြှောက်ခြင်း ဆာ၊ ၇၅း၆-၇၊ ၁ပေ၊ ၅း၆
၇။ ဘုရားသခင်၏ပဲ့ပြင်ခြင်း ဟေရှာ၊ ၄၈း၁၇၊ သု၊ ၃း၅-၆
၈။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း ယော၊ ၁၆း၂၇၊ ယေ၊ ၃၁း၃
၉။ ဘုရားသခင်၏ခွန်အား ဟေရှာ၊ ၄၀း၃၁၊ ဖိ၊ ၄း၁၃
၁၀။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာ မြည်၊ ၃း၂၂-၂၃၊ ဆာ၊ ၈၉း၃၃-၃၄
၁၁။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိခြင်း ဟေရှာ၊ ၄၁း၁၀၊ ထွ၊ ၃၃း၁၄
၁၂။ ဒုက္ခထဲမှကယ်နှုတ်ခြင်း နာဟံ၊ ၁း၇၊ ဆာ၊ ၅၀း၁၅
၁၃။ သွေးဆောင်မှုမှကယ်နှုတ်ခြင်း ဟေ၊ ၂း၁၈၊ ဟေ၊ ၄း၁၆
၁၄။ ရဲရင့်ခြင်း ယောရှု၊ ၁း၉၊ ဆာ၊ ၂၇း၁၄
၁၅။ အသီးသီးခြင်း ၂ပေ၊ ၁း၈၊ ယေ၊ ၁၇း၇-၈
၁၆။ ကြွယ်ဝခြင်း ယောရှု၊ ၁း၈၊ ဆာ၊ ၁း၂-၃
၁၇။ ခရစ်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်း ရော၊ ၈း၃၄၊ ဟေ၊ ၇း၂၅
၁၈။ အဖြေရသောဆုတောင်းခြင်း မ၊ ၇း၇၊ ယော၊ ၁၅း၇
၁။ ခရစ်တော်ဗဟို ၂ကော၊ ၅း၁၇၊ ဂလာ၊ ၂း၂၀။
၂။ ခရစ်တော်ကိုနာခံပါ ရော၊ ၁၂း၁၊ ယော၊ ၁၄း၂၁။
၃။ ကျမ်းစာဖတ်ပါ ၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇၊ ယောရှု၊ ၁း၈။
၄။ ဆုတောင်းပါ ယော၊ ၁၅း၇၊ ဖိ၊ ၄း၆-၇။
၅။ မိတ်ဿဟာယဖွဲ့ပါ မဿဲ၊ ၁၈း၂၀၊ ဟေ၊ ၁၀း၂၄-၂၅။
၆။ သက်သေခံပါ မ၊ ၄း၁၉၊ ရော၊ ၁း၁၆။
၁။ လူတိုင်းအပြစ်သား ရော၊ ၃း၂၃၊ ဟေရှာ၊ ၅၃း၆။
၂။ အပြစ်၏အခ ရော၊ ၆း၂၃၊ ဟေ၊ ၉း၂၇။
၃။ ခရစ်တော်အဖိုးအခပေးပြီး ရော၊ ၅း၈၊ ၁ပေ ၃း၁၈။
၄။ အကျင့်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရ ဧ၊ ၂း၈-၉၊ တိတု၊ ၃း၅။
၅။ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရမည် ယော၊ ၁း၁၂၊ ဗျာ၊ ၃း၂ဝ။
၆။ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရ ၁ယော၊ ၅း၁၃၊ ယော၊ ၅း၂၄။
၁။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် ၁ကော၊ ၃း၁၆၊ ၁ကော၊ ၂း၁၂။
၂။ ဘုရားသခင်၏ခွန်အား ဟေရှာ၊ ၄၁း၁၀၊ ဖိ၊ ၄း၁၃။
၃။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာ မြည်၊ ၃း၂၂-၂၃၊ တော၊ ၂၃း၁၉။
၄။ ဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်း ၊ ဟေရှာ၊ ၂၆း၃၊ ၁ပေ၊ ၅း၇။
၅။ ဘုရားသခင်၏ပြင်ဆင်စီမံခြင်း ရော၊ ၈း၃၂၊ ဖိ၊ ၄း၁၉။
၆။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း၌ဘုရားရှင်၏ မစခြင်း ဟေဗြဲ၊ ၂း၁၈၊ ဆာ၊ ၁၁၉း၉-၁၁။
၁။ ခရစ်တော်ကိုဦးစားပေးပါ မ၊ ၆း၃၃၊ လု၊ ၉း၂၃
၂။ လောကီတပ်မက်ခြင်းကိုပယ်ပါ ၁ယော၊ ၂း၁၅-၁၆၊ ရော၊ ၁၂း၂
၃။ တည်ကြည်ခိုင်မြဲပါ ၁ကော၊ ၁၅း၅၈၊ ဟေ၊ ၁၂း၃
၄။ သူတစ်ပါးအစေကိုခံပါ မာ၊ ၁ဝး၄၅၊ ၂ကော၊ ၄း၅
၅။ ရက်ရောစွာပေးလှူပါ သု၊ ၃း၉-၁၀၊ ၂ကော၊ ၉း၆-၇
၆။ လူတိုင်းကိုသတင်းကောင်းပြောပါ တ၊ ၁း၈၊ မ၊ ၂၈း၁၉-၂ဝ
၁။ ချစ်ခြင်း ယော၊ ၁၃း၃၄-၃၅၊ ၁ယော ၃း၁၈
၂။ နှိမ့်ချခြင်း ဖိ၊ ၂း၃-၄၊ ၁ပေ၊ ၅း၅-၆
၃။ စိတ်ဖြူစင်ခြင်း ဧ၊ ၅း၃၊ ၁ပေ၊ ၂း၁၁
၄။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဝတ်၊ ၁၉း၁၁၊ တ၊ ၂၄း၁၆
၅။ ယုံကြည်ခြင်း ဟေ၊ ၁၁း၆၊ ရော၊ ၄း၂၀-၂၁
၆။ ကောင်းမှုလုပ်ခြင်း ဂလာ၊ ၆း၉-၁ဝ၊ မ၊ ၅း၁၆
၁။ ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်ခြင်း ယော၊ ၁၅း၅။
ငါသည် စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၌တည်၍ ငါသည် လည်းသူ့၌တည်၏၊ ထိုသူသည် များစွာသောအသီးကိုသီးတတ်၏။ ငါနှင့်ကွာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ်အမှု ကိုမျှ မတတ်နိုင်ကြ။
၂။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း တ၊ ၂၀း၃၂။
ညီအစ်ကိုတို့၊ ယခုငါသည်သင်တို့ကို ဘုရားသခင်၌ အပ်နှံ၏။ သင်တို့ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှါ၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောသူအပေါင်းတို့နှင့် အတူသင်တို့အား အမွေပေးခြင်းငှါ၎င်း၊ တတ်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်တရား၌လည်း သင်တို့ကိုငါအပ်နှံ၏။
၃။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း ရော၊ ၈း၁၄။
ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် ဆုံးမပဲ့ပြင်တော် မူသမျှသော သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။
၄။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်း ၂ကော၊ ၅း၇။
အစဉ် ရဲရင့်သောစိတ်ရှိကြ၏။ မျက်မှောက်မမြင်ဘဲ ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည်အတိုင်း၊ ငါတို့သည် ကျင့်ဆောင်ပြုမှုသည်ဖြစ်၍၊
၅။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသော အသက်တာ၌ အသက်ရှင်ခြင်း ၁ယော၊ ၄း၁၁။
ချစ်သူတို့၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဤမျှလောက်ချစ်တော်မူသည်မှန်လျှင်၊ ငါတို့သည်လည်း အချင်းချင်းချစ်ရကြမည်။
၆။ ခရစ်ယာန်မိတ်သဟာယ၌ အသက်ရှင်ခြင်း ၁ယော၊ ၁း၇
ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့၊ ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လျှင်၊ အချင်းချင်း မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း ရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်၊ ငါတို့အပြစ် ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏။
၇။ သက်သေတစ်ဦးအနေဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်း ၁ပေ၊ ၃း၁၅။
စိတ်နှလုံးထဲ၌ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကို ရိုသေခြင်းရှိကြလော့။ သင်တို့မြော်လင့်ခြင်း၏ အကြောင်းကို မေးမြန်းသောသူရှိသမျှတို့အား၊ နူးညံ့သောသဘော၊ ကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့် ပြန်ပြော ခြင်းငှါ၊ ကာလအစဉ်မပြတ် အသင့်ရှိနေကြလော့။
၈။ ရက်ရောစွာပေးကမ်းတတ်သောအသက်တာ၌ အသက်ရှင်ခြင်း ၂ကော၊ ၉း၇။
လူတိုင်း ကိုယ်အလိုအလျှောက်လှူရ၏။ နှမြောသောစိတ်နှင့် မလှူရ၊ မလှူဘဲ မနေရဟု စိတ်ထင်နှင့် မလှူရ၊ အကြောင်းမူကား၊ စေတနာစိတ်နှင့်လှူသော သူကိုသာ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏။
၁။ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု ၁ယော၊ ၅း၁၁-၁၂
သက်သေခံတော်မူချက်ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍၊ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ သားတော်ကိုရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မရသောသူမူကား အသက်ကိုမရ။
And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.
၂။ ဆုတောင်းခြင်းစိတ်ချမှု ယော၊ ၁၆း၂၄
ယခုတိုင်အောင် ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ သင်တို့သည် အဘယ်ဆုကိုမျှ မတောင်းကြသေး။ သင်တို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းငှါ တောင်းကြလော့။ ထိုသို့တောင်းလျှင် ရကြလိမ့်မည်။
၃။ အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ချမှု ၁ကော၊ ၁၀း၁၃
လူ၌ဖြစ်တတ်သော စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုသာ သင်တို့သည် ခံရကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့ မခံနိုင်သော စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ရောက်စိမ့်သောငှါ အခွင့်ပေး တော်မမူ။ သင်တို့သည် ခံနိုင်မည်အကြောင်း စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွ၊ ထွက်မြောက်သော လမ်းကိုလည်း စီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်။
၄။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းစိတ်ချမှု ၁ယော၊ ၁း၉
ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဘော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။
၅။ ပဲ့ပြင်ခြင်းစိတ်ချမှု သု၊ ၃း၅-၆
ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုးစားလော့။ ကိုယ်ဥာဏ်ကို အမှီမပြုနှင့်။ သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မျက်မှောက် ပြုလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ သင်၏လမ်းခရီးတို့ကို ပဲ့ပြင်တော် မူမည်။
အချိန်ပေးပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို ခံယူသည့်နည်းလမ်းများထဲတွင် ကျမ်းပိုဒ် ကို အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းထက် ကြီးမားသော အကျိုးအမြတ်ကို ပေးသောနည်းလမ်း ကို ကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။
သင်သည် ၂၄ နာရီလွန်လျှင်
* ကြားနာပြီးသည့်အထဲမှာ ၅%ကိုလည်းကောင်း
* ဖတ်ရှုပြီးသည့်အထဲမှ ၁၅%ကိုလည်းကောင်း
* လေ့လာပြီးသည့်အထဲမှ ၃၅%ကိုလည်းကောင်း မှတ်မိကောင်းမှတ်မိမည်။ သို့ရာတွင် ကျက်မှတ်ထားပါက ၁၀၀% ကို မှတ်မိနိုင်သည်။
သင်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံထားသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အခြားသူများ ကိုလည်း ခရစ်တော်ထံ ရောက်စေလိုသောဆန္ဒ ရှိပေမည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။ သို့သော် သက်သေခံရန်အတွက် ရှက်သောစိတ်၊ ကြောက်သောစိတ်နှင့် စိတ်မပါတပါဖြစ်ခြင်းများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ များစွာသော ယုံကြည်သူတို့၏ အကြောက်ဆုံးအရာတစ်ခုမှာ ဘာပြော ရမည်ကို မသိခြင်း (သို့) စကားမှားသွားမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အဓိက အရေးပါသော ကျမ်းပိုဒ်များကို အလွတ်ကျက်မှတ်ထားပါက ထိုသို့ ဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်အတွက် ကောင်းသောသက်သေခံတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ရန် ထူးချွန်သော စကားရည်လုသမားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ သက်သေခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ကျမ်းပိုဒ်များ ကို ကျက်မှတ်ထားရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ ။
ရိုစင်ဘာဂျာ (ROSENBERGER) အမည်ရှိသော သင်္ဘောသားတစ်ဦးအကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။ သူသည် ဂျူးဝါဒ (JUDAISM) မှ ပြောင်းလဲလာသူ ဖြစ်ပါသည်။ သူတာဝန် ကျသော သင်္ဘောပေါ်တွင် အခန်းချင်းကပ်နေသောအခန်း၌ ယုံကြည်စခရစ်ယာန် လူငယ် တစ်ဦး ရှိပါသည်။ ထိုလူငယ်သည် သင်္ဘောဖြင့် ခရီးမထွက်မီ သူ၏မိတ်ဆွေ သွန်သင်ပေးသည့် အတိုင်း တပတ်လျှင် ကျမ်းပိုဒ် (၃)ပိုဒ် ကျက်မှတ်ပါသည်။ ဤသို့ ကျက်မှတ်သည်ကို ရိုစင်ဘာဂျာ ကလည်း သိသွားပါသည်။ ခရစ်တော်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရိုစင်ဘာဂျာ၏ ရှုတ်ချကဲ့ရဲ့ ဝေဖန် ပြောဆိုခြင်းများကို မည်သို့ပြန်ဖြေရမည်ဟု ထိုလူငယ်က မသိပါ။ သူသိသည်မှာ ကျမ်းပိုဒ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျမ်းပိုဒ်များကို ထောက်ပြကာ “ကျမ်းစာက ဒီလိုပြောတယ်”ဟု အမြဲပြန်ပြောလေ့ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် (၁၀)လ ကြာသောအခါ နှုတ်
ကပတ်တော်၏ တန်ခိုးကို ရိုစင်ဘာဂျာလည်း မခံနိုင်တော့ပါ။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ဒူးထောက်လျက် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံကာ ပြောင်းလဲသွားပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌လည်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျက်မှတ်ထားရန် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း နားလည်ရပါသည်။ (ဟေရှာ၊ ၅၅၁၁)
“ကျွန်ုပ်တို့ ဝိညာဉ်အသက်တာ၏ တန်ခိုးသည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ သိုထားပြီး ယုံကြည်စွဲလန်းသည့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်”ဟု ဆရာကြီး ဂျော့ချ်မူလာက ပြောခဲ့ပါသည်။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျမ်းစာကျက်မှတ်ရန် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသနည်း။
(၁) တရား၊ ၆း၆ ဘုရားသခင့်အမိန့်။
(၂) ကော၊ ၃း၁၆ ဘုရားသခင့်အလိုတော်။
(၃) မ၊ ၄း၄-၁၁ ခရစ်တော်၏ပုံသက်သေ။
(၄) ဆာ၊ ၁၁၉း၉-၁၁ သန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်ရန်၊ ဘုရားသခင်ကို မပြစ်မှားဘဲ နေနိုင်ရန်။
(၅) ယောရှု၊ ၁:၈ အောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ရန်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဘုရားသခင်၏ စိတ်နှလုံးတော်နှင့် တွေ့သောသူ (ဘုရားသခင် နှစ်သက်သောသူ) တစ်ဦးမှာ ဒါဝိဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဝိဒ်က “ကိုယ်တော်၏ တရားသည်လည်း အကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှာ ရှိပါ၏” ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ (ဆာ၊ ၄၀း၈)
သင်၏ စိတ်နှလုံးထဲမှာလည်း နှုတ်ကပတ်တော် ရှိပါ၏လော။ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ရှိဖို့ရန် ကျက်မှတ်ထားရပေမည်။ (သု၊ ၇း၁-၃)
(၁) ကျမ်းစာကျက်မှတ်နိုင်ရန် ခွန်အားနှင့် မှတ်ဉာဏ်ကို ဘု ရားသခင်ထံ၌ ဆုတောင်းပါ။
(၂) အလွတ်ကျက်မှတ်မည့် ကျမ်းပိုဒ်များနှင့် နီးစပ်ရာ ကျမ်းပိုဒ်များ၊ ဆက်စပ်နေသော ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ထားပါ။
(၃) အလွတ်ကျက်မှတ်မည့် ကျမ်းပိုဒ်၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိရန် လေ့လာထားပါ။
သို့မှသာ ကျက်မှတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူမည်။
(၄) အလွတ်ကျက်မှတ်မည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖတ်ပါ။ (စဉ်းစားလျက်
ဖြစ်စေ၊ ကျယ်ကျယ်ဖြစ်စေ၊ တိုးတိုးလေးဖြစ်စေ)
(၅) ကျက်မည့်ကျမ်းပိုဒ်ကို သင့်တော်သလို စကားစုများခွဲပါ။
ဥပမာ-ယာ၊ ၁း၂၂ ဆိုကြပါစို့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှည့်ဖျား၍ / နှုတ်ကပတ်တရားကို နာရုံမျှသာ ပြုသောသူ မဟုတ်/ တရားကိုကျင့်သောသူ ဖြစ်ကြလော့။
(၆) ခေါင်းစဉ် / ကျမ်းညွှန်း / ပထမစကားစုကို အလွတ်ရသည်အထိ ဦးစွာ ကျက်ပါ။
ဘုရားသခင်ကို နာခံပါ (ခေါင်းစဉ်) / ယာ၊ ၁း၂၂ (ကျမ်းညွှန်း) / ကိုယ့်ကိုကိုယ်
လှည့်ဖြား၍ (ပထမစကားစု) … ကို ကျက်ရန်ဖြစ်သည်။
(၇) ခေါင်းစဉ် / ကျမ်းညွှန်း / ပ စကားစု / ဒု စကားစုကို အလွတ်ရသည်အထိ
ကျက်မှတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ – (ဘုရားသခင်ကို နာခံပါ ယာ၊ ၁း၂၂ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှည့်ဖြား၍ နှုတ်ကပတ်
တရားကို နာရုံမျှသာ ပြုသောသူမဟုတ်) —- ကို ကျက်ရန်ဖြစ်သည်။
(၈) အထက်ပါအတိုင်း စကားစုများကို တစ်ခုပြီးတစ်စု တိုး၍ အလွတ်ကျက်မှတ်
သွားရန် ဖြစ်သည်။ စကားစုတစ်စု တိုးကျက်တိုင်း ခေါင်းစဉ် – ကျမ်းညွှန်း + …. + …. စသည်တို့ကို အစမှပြန်ရွတ်လျက် ကျက်မှတ်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၉) နောက်ဆုံး စကားစုကို ကျက်မှတ်တော့မည်ဆိုပါက ကျမ်းညွှန်းကိုပါ တပါတည်း ထပ်မံရွတ်ဆို ကျက်မှတ်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ(ခေါင်းစဉ် + ကျမ်းညွှန်း + ပ စကားစု + … + …. + …. +
နောက်ဆုံးစကားစု + ကျမ်းညွှန်း) ဥပမာ-ယာ၊ ၁း၂၂ ကျမ်းပိုဒ်၏ နောက်ဆုံးစကားစုဖြစ်သော၊ (တရားကိုကျင့်သောသူဖြစ်ကြလော့) ကို ကျက်မှတ်တော့မည်ဆိုပါက (ယာ၊၁း၂၂)
ကျမ်းညွှန်းကိုပါ တပါတည်း ကျက်မှတ်ရွတ်ဆိုသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၁ဝ)ထို့ကြောင့် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို ကျက်ရမည့် နည်းအစီအစဉ်ကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရမည်ဆိုသော် –
(က) ခေါင်းစဉ် + ကျမ်းညွှန်း+ ပ စကားစု —- ကို ဦးစွာကျက်ပါ။ (ခ) ။ + ။ + ။ + ဒုစကားစု —- ကိုကျက်ပါ။
(ဂ) ။ + ။ + ။ + ။ + တစကားစု—-ကိုကျက်ပါ။
(ဃ) ။ + ။ + ။ + ။ + ။ + —- စသည်ဖြင့်
(င) ခေါင်းစဉ် + ကျမ်းညွှန်း+ ပ စကားစု + … +… + …
နောက်ဆုံးစကားစု+ ကျမ်းညွှန်းကို ကျက်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် –
(ခေါင်းစဉ် + ကျမ်းညွှန်း + ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုလုံး + ကျမ်းညွှန်း) ဖြစ်ပါသည်။
(၁၁) အထက်ပါအတိုင်း ကျက်မှတ်ပြီးပါက အလွတ်ပြန်ရေးပါ။
(၁၂) အလွတ်ရေး၍ ရပြီဆိုပါက၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်အတွက် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါ။
(၁၃) ထို့နောက် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား အလွတ်ရွတ်ပြပါ။ (ပိုမိုမှတ်မိစေရန် ဖြစ်ပါသည်)
(၁၄) အလွတ်ကျက်ပြီးသော ကျမ်းပိုဒ်ကို တစ်နေ့လုံး မကြာခဏ ပြန်ရွတ်ပါ။ နေ့စဉ်ပြန်နွေးပါ။ ခေါင်းစဉ် + ကျမ်းညွှန်းကိုလည်း ထည့်နွေးပါ။ (အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် (၇) ပတ် / ရက် (၅၀) ခန့် နွေးပါ။)
ကျမ်းပိုဒ်ရေးထားသောစာအုပ် (သို့) ကဒ်ပြားများကို သွားလေရာရာ အမြဲ ယူသွားပြီး အားလပ်ချိန်ရတိုင်း ပြန်နွေးပါ။
(၁၅) တစ်ပတ်လျှင် ကျမ်းပိုဒ် (၂) ပိုဒ် ကျက်မည်ဆိုပါက အကြံဉာဏ်ပေးလိုသည်မှာ
(က) ပထမကျမ်းပိုဒ်ကို တနင်္လာနေ့တွင် ကျက်ပါ။ နွေးပါ။ အင်္ဂါနေ့တွင် တစ်နေ့လုံးနွေးပါ။
(ခ) ဒုတိယကျမ်းပိုဒ်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကျက်ပါ။ နွေးပါ။ ကျက်ပြီးသား ပထမကျမ်းပိုဒ်ကိုလည်း နွေးပါ။ ကြာသာပတေးနေ့တွင် (၃) ပိုဒ်စလုံးနွေးပါ။ (ဂ) သောကြာ၊ စနေနေ့များတွင် (၂) ပိုဒ်စလုံးကို နွေးပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် (၂) ပိုဒ်စလုံးကို အလွတ်ပြန်ရေးပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား အလွတ်ရွတ်ပြပါ။
၃။ ကျမ်းစာကျက်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်အားသိစေလိုသောအချက်များ
(၁) ကျမ်းစာကျက်မှတ်ရန် မှတ်ဉာဏ်နှင့် ခွန်အားကို ခရစ်တော်အားဖြင့် သင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ (ဖိ၊ ၄း၁၃)
(၂) တစ်ပတ်လျှင် တစ်ပိုဒ် (သို့) နှစ်ပိုဒ် ကျက်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
(၃) ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် သင့်အထဲ၌ ကြွယ်ဝစွာတည်ရှိရန် ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိပြီး (ကော၊ ၃၁၆) အလိုတော်နှင့် ညီသောဆုကိုတောင်းလျှင် ဘုရားရှင်သည် ဧကန်အမှန် ပေးတော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချပါ။ (၁ယော၊ ၅း၁၄-၁၅)
(၄) အပတ်တိုင်း သင်ကျက်ပြီးသော ကျမ်းပိုဒ်များအား စစ်ဆေးပေးရန် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပါ။ သူ့အား အလွတ်ရွတ်ပြပါ။ ထိုမိတ်ဆွေသည် သင်ကဲ့သို့ ကျက်မှတ် နေသူဖြစ်လျှင် ပိုမို၍ကောင်းပါသည်။
(၅) ကျမ်းပိုဒ်ကျက်ရန် အချိန်တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် ကျက်ဖြစ်အောင်
ကျက်ပါ။ သင်၏ စိတ်အကြည်လင်ဆုံးအချိန်၊ အနှောင့်အယှက်အသံများ ကင်းဝေသောအချိန် ဖြစ်ပါစေ။
(၆) နံနက်စောစော အိပ်ယာထခြင်းအချိန် (သို့) ညအိပ်ယာမဝင်မီအချိန်သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အိပ်ချင်နေသောအချိန်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောအချိန်သည် ကျမ်းပိုဒ်ကျက်ရန် မသင့်လျော်ပေ။ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု အများဆုံးပေးနိုင်သောအချိန် ဖြစ်ရပါမည်။
(၇) ခေါင်းစဉ် + ကျမ်းညွှန်း + ကျမ်းပိုဒ် + ကျမ်းညွှန်း စသဖြင့် တစ်ဆက်တည်း အမြဲရွတ်ဆိုပါ။ ပြန်နွေးပါ။
(၈) စကားလုံး အတိအကျမှတ်ပါ။ သို့မှသာ ယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်အဝဖြင့် ဟောပြောနိုင်မည်။ ရွတ်ဆိုနိုင်မည်။ ပြန်နွေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၉) (TOPIC) ခေါင်းစဉ် ကျက်မှတ်ခြင်းဖြင့် –
(က) ကျမ်းပိုဒ်၏အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ပြီးကျက်မှတ်ရန်နှင့် ပြန်နွေးရန် လွယ်ကူစေသည်။
(ခ) လိုအပ်သောအချိန်၌ (ကျမ်းပိုဒ်ကို) အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်မည်။
(၁၀) ကျမ်းညွှန်း (REFERENCE) ကျက်ထားခြင်းဖြင့် –
လိုအပ်သောအချိန်၌ “ဥပမာ သူတစ်ပါးကို ကူညီလိုသောအခါဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးကို သွန်သင်လိုသောအခါဖြစ်စေ၊ ရှင်းပြလိုသော အခါဖြစ်စေ၊ တရားဟောချက် ပြင်ဆင်သော အခါဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးကို နှစ်သိမ့်အားပေးလိုသောအခါဖြစ်စေ၊ ကလေးများကို သွန်သင်ရန် ပြင်ဆင်သောအခါဖြစ်စေ” အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင် မည်။ ကျမ်းညွှန်း (အစနှင့်အဆုံး) ၂ ကြိမ်ရွတ်ဆိုရခြင်းမှာ ပိုမိုမှတ်မိစေရန် ဖြစ်သည်။
(၁၁) သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ အိမ်လိပ်စာများ၊ မွေးနေ့များ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ
စသည်တို့ကို သင်မှတ်မိပါသလား။ ထိုအရာများကိုပင် မှတ်မိနိုင်သေးလျှင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်း ဘုရားသခင်၏မစခြင်း၊ ကျေးဇူးတော် အားဖြင့် မှတ်မိနိုင်မည်ဟု သင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပါ။ (ဖိ ၄း၁၃။ မာ ၉:၂၃)
(၁၂) တစ်ပတ်အတွင်း ကျမ်းပိုဒ် (၂) ပိုဒ် အလွတ်ရလျှင် ငွေ (၁၀၀၀၀) ပေးမည်ဆိုပါက သင်ကျက်မှတ်မည်လော။ ကျေနပ်အားရဖွယ်ကောင်းသော လှုံ့ဆော်မှုရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ခက်ခဲသောအရာများကိုပင် ပြီးပြည့်စုံအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျမ်းပိုဒ်ကျက်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် ထာဝရတည်မြဲသော ဝိညာဉ်ရေးရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရပေမည်။ မှန်ကန်သော လှုံ့ဆော်မှုရှိသောကြောင့် ကျက်မှတ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်သင့်သည်။ ။
(၁၃) သာမန်အားဖြင့် မှတ်မိရန်ခက်ခဲသော ကျမ်းပိုဒ်ဆိုလျှင် စိတ်ကူးဖြင့် သဏ္ဌာန်ဖော်ကြည့်ပါ။ ထိုသို့ သဏ္ဌာန်ဖော်ကြည့်သောပုံကို မြင်ယောင်နေပါ။ နောင်တွင် ထိုကျမ်းချက်ကို အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပေမည်။
(၁၄) ကျမ်းပိုဒ်ကို မျက်စိဖြင့် တိတ်ဆိတ်စွာဖတ်ခြင်း၊ ပါးစပ်ဖြင့် ကျယ်ကျယ်ရွတ်ဆိုခြင်း၊ လက်ဖြင့် ရေးခြင်းတို့သည် မှတ်မိစေရန် များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။
(၁၅) သင်ကျက်မှတ်ပြီးသော ကျမ်းပိုဒ်များကို ပြန်မနွေးဘဲနေပါက မေ့သွားနိုင်သည်။
သင် ကျက်မှတ်ခဲ့သမျှ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်းကာ အချည်းနှီးဖြစ်သွားနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
(၁) ဆာ၊ ၁၁၉း၉-၁၁ သန့်ရှင်းစွာ အသက်ရှင်နိုင်/ဘုရားသခင်ကို မပြစ်မှားမိ။
(၂) ယောရှု၊ ၁း၈ အောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နိုင်။
(၃) မ၊ ၄း၄-၁၁ စာတန်နှင့်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုအောင်နိုင်။
(၄) ဆာ၊ ၁၁၉း၅၉ ဘုရားသခင်ပြသောလမ်းကို သိနိုင်၊ လိုက်နိုင်။ (၅) ဗျာ ၁း၃မင်္ဂလာရှိ။
(၆) ယေ၊ ၁၅း၁၆ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရ။
(၇) ၁ပေ၊ ၃း၁၅ ထိရောက်စွာသက်သေခံနိုင် (ကျက်မှတ်ထားလျှင်)
———— စသည့် အကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။